Ukukhiqizwa Kwebhokisi Lesipho Sephepha Lekhadibhodi Lekhwalithi Ephakeme YaseChina kanye Nefektri |SIUMAI
Ibhokisi Lesipho Lephepha Lekhadibhodi Lekhwalithi Ephakeme
Kunomehluko omkhulu phakathi kokupakishwa kwebhokisi lesipho lekhwalithi ephezulu namabhokisi okupakisha ajwayelekile.Amabhokisi ezipho ngokuvamile asebenzisa amakhadibhodi ampunga njengolwelwesi ukuze akhe isisekelo esiqinile sebhokisi lesipho.Ingaphandle ngokuvamile isongwe nge indawo enhle yokunyathelisa noma iphepha elikhethekile.Ibhokisi lesipho lekhwalithi ephezulu lenyusa inani lomkhiqizo ngokwezinga elithile, aligcini nje ngokuwenza ube muhle umkhiqizo, kodwa futhi lihehe amakhasimende.Enqubweni yokwenza amabhokisi ezipho, ubuciko buvama ukukhetha ukugxiviza okushisayo komkhiqizo, iphethini ye-uv nobunye ubuciko ukuze kuboniswe ikhwalithi ephezulu.
I-MOQ Imvamisa ama-pcs ayi-1000, Sicela uthumele i-imeyili ukuze uthole inani elithile
Kungani ukhetha ukupakishwa kwe-SIUMAI?
1. I-SIUMAI inemboni yayo, eyasungulwa ngo-2002 futhi isineminyaka engu-20 ihlola embonini yokunyathelisa nokupakisha.Singahlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu namanani aphelele.Ukuxhumana okuqondile efektri kungaqinisekisa ukuthi zonke izinkulumo zisebenza kahle kakhulu.
2. Indlela yokupakisha iklanywe ngokukhululekile, ngaphandle kwanoma yimuphi usayizi, uhlobo lwebhokisi, kanye nemikhawulo yezinto ezibonakalayo.Nikeza zonke i-OEM, izinsiza ze-ODM.
3. Isivinini esisheshayo sokuqinisekisa, amasampula edijithali, amasampula omshini, amasampula wangaphambi kokukhiqiza, njll.Ukuqinisekisa ukuthi yonke imininingwane ingakhulunywa futhi iqinisekiswe namakhasimende.
4. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi, inqubo yokulawula ikhwalithi eqinile, noma yimiphi imikhiqizo enesici ngeke ilethwe kumakhasimende.Uma kukhona izinkinga ekukhiqizeni, ukuhlolwa kwekhwalithi kungaba ngokokuqala ngqa ukuthola.Yiba nesibopho ngo-100% kumakhasimende.
5. Isiqinisekiso sokudiliva, i-SIUMAI ithembisa ukuletha ngesikhathi.Silandela isimiso somsebenzi osebenza kahle kakhulu.Ngemuva kokuthi i-oda lihlelelwe ukukhiqizwa, sizohlela ukukhiqizwa kwezimpahla ngesivinini esikhulu sesayensi.
6. Isevisi ephelele ngemva kokuthengisa, i-SIUMAI inohlelo oluphelele lwesevisi yangemuva kokuthengisa.Ukuhlolwa kwethu kwekhwalithi nokuthengisa kuzobambelela kusimo sengqondo sesevisi esichwepheshile kuwo wonke ama-oda, futhi siqhubeke sithintana amahora angama-24*7.
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukuphrinta okunemibala eminingi, iphethini egcwele neyunifomu, enhle futhi ephanayo.Izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphezulu zihlanzekile, azinabuthi futhi ziphephile ukuzisebenzisa.Sekela ukwenza ngokwezifiso ukwenza isampula ngokwezifiso, ukuthengiswa okuqondile kwasefekthri.
Kumafayela ahlinzekwe yikhasimende, ukuze uwaphrinte ngendlela ecacile, kuyanconywa ukuthi usebenzise amafomethi e-vector afana ne-(AI, PDF, CDR).Uma ingekho ifomethi yefayela enjalo, ungaphinda unikeze anokulungiswa okuphezulu (300dpi) JPG, amafayela efomethi ye-TIF.
Amakhasimende angahlinzeka ngemicabango yawo nemikhiqizo ezopakishwa.Sizohlela abaklami abangochwepheshe ukuze bakunikeze imiklamo.Futhi unikeze amasampula edijithali ukuze uthole ireferensi yamakhasimende.
Isikhathi sokulethwa esifushane: izinsuku ezingama-7-15
Okwedlule: Ibhokisi lemaski lokuhlinza lebhokisi lebhokisi lemaski ibhokisi lemaski
Olandelayo: Ibhokisi Lesipho Lephepha Lekhadibhodi Lekhwalithi Ephakeme
Iphepha lekhadibhodi le-Wholesale Custom Premium Luxury...
I-Soap Kraft Paper Ibhokisi Lokuphrinta Iphakethe Lephepha Lensipho...
Idizayini Engokwezifiso Umbala Ogcwele We-Foil Yegolide Ubuhle P...
Amakhadi Ephepha Enziwe Ngokwezifiso anezimbobo ezilengayo
I-Mobile Phone LCD Touch Screen Phone Assembly Pa...